Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Fraport waxay heshaa magdhow masiibo ah oo kusocota howlaha garoonka diyaaradaha ee Frankfurt
Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Dowladaha Jarmalka iyo Hesse si ay u siiyaan million 160 milyan si loogu ilaaliyo u diyaargarowga hawlgalka ee garoonka diyaaradaha ee Frankfurt intii lagu jiray xiriddii ugu horreysay ee Covid-19.
Fraport AG waxay heshaa wadar ahaan ilaa 160 milyan oo magdhow ah.
Kharashaadkii ku baxay si loo ilaaliyo u diyaargarowga hawlgalka ee FRA intii lagu jiray xirxirkii ugu horreeyay ee coronavirus sanadka 2020 waa la magdhabayaa.
Bixinta magdhowgu inta ay le'eg tahay waxay saameyn togan ku yeelan doontaa natiijada hawlgalka Kooxda.
Shirkadda Fraport AG, milkiilaha iyo wadaha Madaarka Frankfurt (FRA), waxay ka heleysaa wadar ahaan qiyaastii million 160 milyan oo ka timaadda gobollada Jarmalka iyo Gobolka Hesse magdhowga kharashyada - oo aan hore loo daboolin - ee ku yimid in la ilaaliyo u diyaargarowga hawlgalka ee FRA intii lagu jiray xiritaankii ugu horreeyay ee coronavirus ee 2020.
Go'aanka waxaa la gaarsiiyay maanta (July 2) Wasiirka Jarmalka ee Gaadiidka iyo Kaabayaasha Dijital ah, Andreas Scheuer, iyo Wasiirka Dhaqaalaha, Tamarta, Gaadiidka iyo Guryeynta ee Hessian, Tarek Al-Wazir, markii ay soo bandhigayeen Fraport AG dukumiintiga rasmiga ah ee la soo saaray. dowladda Jarmalka.
Bixinta magdhowga inta ay le'eg tahay waxay saameyn togan ku yeelan doontaa natiijada hawlgalka Kooxda (EBITDA) - sidaas darteedna waxay xoojineysaa booska sinnaanta Fraport AG. Bishii Febraayo ee sanadkaan, dowlada dhexe iyo dowladaha Jarmalka waxay go’aansadeen heshiiska guud ee lagu taageerayo garoomada Jarmalka, oo ay kujirto garoonka diyaaradaha ee Frankfurt, oo ay si ba’an ugu dhufteen CUDURKA-19 faafa.
Guddoomiyaha guddiga fulinta ee Fraport AG, Dr. Stefan Schulte, ayaa sharraxay: “Weli waxaan ku jirnaa dhibaatadii ugu weyneyd ee duulimaadyada casriga ah, taasoo dhalisay khasaaro badan. Intii lagu guda jiray xiriddii ugu horeysay ee 'Covid-19, waxaan garoonka Frankfurt si joogto ah ugu furnay duulimaadyada dib u celinta iyo xamuulka muhiimka u ah, in kasta oo xiritaanka ku meelgaarka ah uu macno badan u yeelan lahaa dhaqaale ahaan waqtigaas. Magdhawgan aan ka heli doonno golayaasha Jarmalka iyo Hesse ayaa calaamad cad u ah taageerada si loo ilaaliyo kaabayaasha howlaha garoonka inta lagu jiro xiisad aan horay loo arag. Bixinta ayaa sidoo kale si xoog leh uga qayb qaadata xasilinta xaaladda dhaqaale ee Fraport AG. Tan waxaa sidoo kale taageeray kororka muuqda ee baahida aan hadda kala kulanno Frankfurt. Sidaa darteed waxaan ku rajo weynahay horumarka ganacsigeena bilaha soo socda - in kastoo ay qaadan doonto sanado ka hor intaanan dib u soo ceshano heerarkii taraafikada ee horay u jiray.